Umshini weqhwa ongu-0.5T
Umshini weqhwa we-500kg / wosuku we-flake + 300kg umgqomo wokugcina iqhwa. Umshini une-plug-and-play design. Ilungele ukwenziwa kweqhwa ngemuva kokuxhumeka okulula ngamanzi namandla. I-Ice iphuma kungakapheli imizuzu emihlanu ngemuva kokucindezela umsebenzisi inkinobho yokuqala. Yonke imisebenzi yokwenza iqhwa yenziwa ngokugcwele ngokuzenzakalela ngaphansi kolawulo lwe-PLC. Uhlelo luzozivikela ekushodweni kwamanzi / i-ice bin egcwele / engazinzile ukunikezwa kwamandla / izinga lokushisa eliphakeme kakhulu noma elibandayo lokushisa / nezinye izinhlobo zokwehluleka. W I-evaporat eklanyelwe ...
Umshini weqhwa ongu-0.3T
Igama lomkhiqizo: Imininingwane ye-Herbin Ice Systems yemishini engu-0.3T / day cube ice. Igama lomkhiqizo: Imodeli yomshini weqhwa le-Cube: Umthamo wokukhiqiza we-Ice nsuku zonke we-Ice: Ngaphezulu kwama-300kgs ngamahora angama-24 isimo esisebenza ngokujwayelekile: 30C izinga lokushisa elifanele kanye no-20C amanzi we-inlet ubukhulu: 22x22x22mm Umthamo wokugcina i-Ice: 280kgs I-Condenser: Amandla we-Air / Water apholile fakela ugesi wesigaba esisodwa Qaphela: Umthamo weqhwa womshini usekelwe ekushiseni kwama-30C kuma-20C kanye nasezingeni lokushisa lamanzi le-20C. W ...
Amandla okugijima: 93.75 KW.
Ukushuba kweqhwa: 1.8-2.2mm.
Umthamo wesitoreji se-Ice bin: ama-15,000 kgs ama-ice flakes noma enziwe ngokwezifiso.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-30,000 kgs amaqhwa eqhwa ngamahora angama-24.
Umthamo wesitoreji se-Ice bin: 10,000 kgs of ice flakes noma eyenziwe ngezifiso.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-20,000 kgs amaqhwa eqhwa ngamahora angama-24.
Umthamo wesitoreji se-Ice bin: ama-2500 kgs ama-ice flakes noma enziwe ngokwezifiso.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-5000 kgs eqhwa ngamahora angama-24
Umthamo wesitoreji se-Ice bin: ama-1500 kgs ama-ice flakes noma enziwe ngokwezifiso.
Umthamo wokukhiqiza weqhwa nsuku zonke: ama-3000 kgs amaqhwa eqhwa ngamahora angama-24.